Margarekha » कोहलपुर १४ को चिडिमार बस्ती निर्माणमा कमिशनको लागि चलखेल
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं.१४र १५ मा ३३ घरपरिवार लोप उन्मुख हुँदै गएको चिडिमार समुदायको बसोबास रहेको छ । उक्त चिडिमार बस्तीमा गरिब तथा विपन्न वर्गका मानिसहरु रहेका छन् । सोही बस्तीमा एकिकृत नमूना बस्ती कार्यक्रम संघिय सरकार र प्रदेश सरकारको पूरक अनुदानमा बजेट परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६ । ०७७ को उक्त कार्यक्रम अहिले अषाढ मसान्तमा हतार हतार गरि बजेट सक्ने कामतर्फ उक्त एकृकित बस्ती निर्माणको व्यवस्थापकिय जिम्मा गोपाल गिरीले लिएका छन् ।
करिब ३ लाख पचास हजार रकम लागतमा एउटा घर निर्माण गर्नुपर्ने प्राविधिक स्टमेट भएतापनी ठेकदारले बुधबार कमसल खालको इट्टा झारेपछी चिडिमार बस्तीका मानिसहरु थप पिडामा परेका छन् । कमसल खालको इटा मात्र हैन प्रति टयाक्टरमा १सय ५० इट्टा कम ल्याई सिधै चिडिमार बस्तीका बासिन्दाहरुलाई ठगी गर्ने काम भएको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १४ चिडिमार बस्तीका बासिन्दा गोवेरे चिडिमारले बताए ।
चिडिमार बस्तीमा कच्चा इट्टा आएपछी आक्रोसमा एक स्थानिय बासी
त्यतिमात्र हैन चिडिमार बस्ती निर्माणका क्रममा बालुवा र सिमेटमा कमसल खालको प्रयोग गर्न लगाइएको छ । कमसल खालको इटा प्रयोग भएको चिडिमार बस्तीमा बुधबार पुग्दा बस्ती निर्माणमा जिम्मा लिएका गोपाल गिरीले कच्चा इट्टा आएको समेत स्वीकार गरेका छन् । चिडिमार बस्तीमा अधिकाश दैनिकी मजदुरी गरेर जिविका चलाउने परिवारको संख्या रहेको छ । तर यिनै मजदुरी गरि दैनिकी चलाइरहेका परिवारबाट समेत कमिशनको चलखेल शुरु भएको छ ।
लामो समयदेखी चिडिमार बस्तीमा बस्दै आएका कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १४ का नरेश चिडीमारले भने एकिकृत बस्ती निर्माणमा कच्चा २ नम्बरको इट्टाको प्रयोग गर्न खोजिएको छ । ट्याक्टरमा इट्टा ल्याउदा पनी १ सय ५० इट्टा कम ल्याएर हामी मजदुरहरुलाई ठग्ने काम भएको छ । हामीलाई पैसा दिएको भए आफै घर बनाउथ्यौ सामाग्री गुणस्तर प्रयोग गर्ने थियौँ यहाँ दलालबाट काम भयो हामी मर्कामा प¥यौ उनले भने । सामान्यतया एकिकृत बस्ती निर्माण करिब ६ लाख बढिको कमिशन चलखेल भएको चिडिमार बस्तीका बासिन्दा बताउछन् । यसरी कमिशनको चलखेल भएको चिडिमार बस्ती सामान्य उदाहरण मात्र हो यस्ता विकास निर्माणका काममा भएका अधिकाश कमिशनको चलखेल कोहलपुर नगरपालिका विभिन्न वडाहरुमा भएका छन् यस विषयमा सम्वन्धीत निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।